तरुण अध्यक्ष बिष्टले व्यहोरे शिला नेपालीको पथ्थरी अप्रेशनको खर्च – Karnalisandesh
तरुण अध्यक्ष बिष्टले व्यहोरे शिला नेपालीको पथ्थरी अप्रेशनको खर्च
प्रकाशित मितिः २९ भाद्र २०७७, सोमबार १५:४३ September 14, 2020
सुर्खेत। नेपाल तरुण दल सुर्खेतका अध्यक्ष हरि बिष्ट दोस्रो पटक लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण समस्यामा परेका व्यक्तिहरुको सहयोगमा जुटेका छन्।
यसै क्रममा आइतबार अध्यक्ष्य बिष्टले एकल महिला शिला नेपालीको पित्तथैलीको अप्रेशन गर्नको लागि सहयोग गरेका छन्। अध्यक्ष बिष्टले प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा औषधी खर्चसहित २५ हजार शिलाको लागि सहयोग गरेका हुन्।
बिष्टले अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्कासँगको कुराकानीमा पाँच हजार छुट गराएका थिए। गिट्टि कुटेर जीविको पार्जन गरिरहेकी शिलाका श्रीमान ८ वर्ष पहिले वितेका थिए। एकल महिला शिला छोरा-छोरीको शिक्षा दिक्षाको व्यवस्थापनको त के कुरा ? बिहान बेलुका छाक टार्नसमेत गाह्रो भएको बताउछिन्।
आर्थिक अभावकै कारण छोरीको एसइईपछिको शिक्षा दिन नसकेको बताउने शिलाको स्वास्थ्य अवस्था विग्रेपछि चुल्हो चलाउन धौधौ भएको छ। उनलाई सहयोगी मनहरुको खाँचो परिरहेको छ।
शिलाको नाजुक अवस्था थाह पाएपछि अध्यक्ष बिष्टले अस्पतालको खर्चसँगै २५ केजी चामल, एक केजी दाल, एक पोका नुन र एक पोका तेल प्रदान गरेका छन्। शिलाका दुई छोरा, एक छोरी छन्। यस अघि अध्यक्ष बिष्टले सरकारले जारी गरेको लकडाउनको समयमा दर्जनौंलाई सहयोग गरेका थिए।